Posted by: chhepyastra weekly | फ्रेवुअरी 25, 2012
पार्टीभित्र विकृति बढ्दै गएको छ
० पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट माआवादी पार्टीभित्रको विवाद सुल्भियो भन्ने थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन नि ?
० तर, बहस जारी छ भन्दा पनि पार्टीले गरेका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन नभएपछि त्यसले पार्टीको छविमा आाच पुर्याउादैन र ?
० अहिले तपाईंको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ तर सरकारको कार्यशैली हेर्दा जनता रुष्ट छन्, त्यसले त पार्टीको छविमा समेत आाच पुर्यायो होइन र ?
पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नसकिएको कुरा सही हो । पार्टीभित्र विकृति बढ्दै गएको छ । विश्व समाजलाई शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर सुरु गरिएको हाम्रो आन्दोलनमा आफैा रूपान्तरण हुन नसक्दा एउटा दुःखद् अवस्था आइपरेको छ । नेपाली राजनीतिमा अन्य पार्टीको नेतृत्वको तुलनामा हाम्रो पार्टीको छवि आफैा राम्रो छ । तर, कम्युनिस्ट संघर्षमा लाग्नुपर्छ । त्यसले पार्टीलाई सिद्धान्तअनुसारको व्यवहारमा पुर्याउाछ ।